Nampiasaina tamin'ny fampiasana loharanon-karena plastika fako. Amin'ny alàlan'ny famoahana tanteraka ireo polymère molekiola avo lenta amin'ny vokatra plastika fako dia miverina amin'ny toetry ny molekiola kely na monomères izy ireo mba hamokarana solika solika sy solika matevina. Eo ambanin'ny fahitana fiarovana, fiarovana ny tontolo iainana, ary fandidiana mitohy sy milamina, ny Recycling, ny tsy fandriampahalemana ary ny fihenan'ny plastika fako. Ny tsipika famokarana pyrolysis plastika an'ny orinasa dia mampiasa catalyst compite manokana sy agnement dechlorination mitambatra manokana hanala ny gazy asidra toy ny hydrogen chloride namboarina avy amin'ny famakiana ny PVC ara-potoana, nanitatra ny androm-piainan'ny fitaovana.
Ho potipotika ny sombin-kodiarana aorian'ny famafazana fehikibo, refin-fehikibo, mpanondrana visy, sns amin'ny tsindry ratsy ao amin'ny rafitra pyrolysis mitohy amin'ny alàlan'ny pyrolysis, ao amin'ny rafitra aorian'ny hafanan'ny fiakaran'ny mari-pana 450-550 ℃ eo ambanin'ny toetran'ny pyrolysis haingana fanehoan-kevitra, miteraka solika pyrolysis, carbon black, pyrolysis wire ary entona mora entona, entona azo dorana amin'ny alàlan'ny fisarahana solika sy ny entona fanarenana entona aorian'ny fidirana ao amin'ny fatana fandoroana mafana, ho an'ny rafitra famokarana rehetra mba hanomezana hafanana, hanatrarana fahaleovan-tena amin'ny angovo;
Ny tsipika famokarana kodiarana fanodinana fako dia fitaovana feno lehibe feno izay manasaraka tanteraka ireo akora telo lehibe ao anaty kodiarana: fingotra, tariby vy ary fibre amin'ny hafanan'ny efitrano ary mahatsapa fanodinana 100%. Ny tsipika famokarana kodiarana fanodinana fako dia afaka manamboatra kodiarana ao anatin'ny 400-3000mm isaky ny savaivony arakaraky ny fepetra takian'ny mpanjifa, miaraka amin'ny fampiharana azo antoka, ny haben'ny vokatra dia azo fehezina ao anatin'ny 5-100mm, ary ny vokatra dia mety hahatratra 200-10000kg / h . Ny tsipika famokarana dia mandeha amin'ny hafanan'ny efitrano ary tsy hiteraka fandotoana faharoa amin'ny tontolo iainana. Ny tsipika famokarana dia mandray ny rafitra fanaraha-maso PLC, izay mora ampiasaina sy mitazona, miaraka amin'ny fanjifana angovo ambany sy ny androm-piainana maharitra.
Boiler burner dia manondro ny boiler burner, ny boiler burner ary ny boiler entona dia ny fitaovana fanampiana manandanja lehibe indrindra, ny boiler burner dia mizara ho mpamono solika sy mpandoro entona ary mpandoro solika roa, ao anatin'izany ny burner fuel dia azo zaraina ho burner menaka maivana ary mpandoro menaka mavesatra, ny menaka maivana dia manondro ny diesel, ny menaka mavesatra dia manondro lasantsy fitrandrahana solika, menaka gazoala aorian'ny ambin'ny menaka mavesatra; Ireo mpandoro entona dia azo zaraina ho mpandoro entona voajanahary, mpandoro entona ao an-tanàna, mpandoro LPG ary mpandoro biogas.
fanafanana fipoahana mafana
Ny lafaoro fipoahana mafana dia karazana fitaovana fanamainana misy fahombiazana be sy fitehirizana angovo. Haingam-pandeha ny tahan'ny fanafanana, ary 20 minitra monja avy amin'ny fanafanana ka hatramin'ny fiasan'ny mahazatra. Ny mari-pahaizana avo lenta, ny hafanan'ny rivotra dia azo ovaina ao anatin'ny laharana naoty. .Miorina ny rivotra mafana ary ny fahamendrehana amin'ny fanaraha-maso ny mari-pana dia mety ho ao anatin'ny ± 5 ℃ .Filaminana azo antoka sy azo antoka ary azo antoka.
Crusher plastika dia be mpampiasa amin'ny famerenana ny fako plastika sy ny plastika fanodinana plastika crusher maotera herinaratra eo anelanelan'ny 3.5 sy 150 kilowatts, ny hafainganam-pandeha roller dia matetika eo anelanelan'ny 150 sy 500rpm, ny firafitra dia manana feed tangent, top feed feeds; ilay antsy roller dia tsy mitovy amin'ny roller antsy antsy sy roller antsy lava.
Tapaka ny vatan'ny valanoranon'ny valanoranony, teo ambanin'ny asan'ny ascenseur siny, nalefa tany amin'ny fitoeram-bokatra, aorian'ny alàlan'ny feeder vibrant electromagnetic dia handefa fitaovana milamina sy milamina amin'ny fikosoham-bary any Raymond, aorian'ny vovoka fikosoham-bary eo ambanin'ny asan'ny blower dia mamakafaka ny famakafakana fandaminana. milina, aorian'ny fisarahana ny fitaovana avy amin'ny fantsom-pohy ka hatramin'ny cyclone lehibe hanangonana vovoka, avy eo amin'ny fivoahan'ny vavany, mba hamenoana ny fizotran'ny gazy karbonika.
Ny menaka pyrolysis novokarin'ny plastika fako sy ny kodiarana dia nodiovina indray. Ny index teknika lehibe dia mety hahatratra ny fenitry ny menaka diesel 0 # na -10 # ary azo ampiasaina fa tsy ity farany. Ny vidiny koa dia azo ampitomboina $ 230 / taonina noho ny menaka manitra.
Izy io dia ampiasaina amin'ny fampihenana, ny fitsaboana tsy mampidi-doza ary ny fampiasana loharanon-tsolika mba hahitana ny fanarenana ny tany. Amin'ny alàlan'ny fanasarahana ny rano sy ny zavatra biolojika ao anaty fotaka amin'ny tany, ny lanjan'ny menaka mineraly ao anaty vokatra mivaingana aorian'ny fitsaboana vaky dia ambany noho ny 0 05%. Eo ambanin'ny fahitana fiarovana, fiarovana ny tontolo iainana, ary ny asa mitohy sy marin-toerana, ny fihenan'ny sludge, ny fitsaboana tsy mampidi-doza ary ny fampiasana loharano.
Ny fako ao an-tanàn-dehibe sy ny fako ao an-trano dia mazàna amin'ny fanjifana fako isan'andro. Ity karazana fako tsotra ity dia matetika apetraka ao anaty harona mainty na fitoeram-pako, izay misy fangaro akora azo averina mando sy maina, fitaovana biolojika, tsy miaina ary biodegradable.
Fanadiovana plastika maloto, Tyro Pyrolysis, Masinina fanodinana fako, Fambolena Pyrolysis mitohy, Masinina fanodinana plastika, Batch Pyrolysis Plant,